Filannoo Ameerikaa: Barnee Saanders yaada Raashiyaan duula filannoo irratti isa deeggaruuf dhiyeessiteef deebii kennan - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Ameerikaa: Barnee Saanders yaada Raashiyaan duula filannoo irratti isa deeggaruuf dhiyeessiteef deebii kennan
22 Guraandhala 2020
Barnee Sandeersi Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa harka galfachuu irraa of qusachuu qabdi jedhan.
Pirezedaantummaaf paartii Dimokiraatotaa irraa dorgomuuf qophiitti kan jiran Barnii Saanders yaada Raashiyaan duula filannoo irratti isaan deeggaruuf jetti jedhu akka hin fudhanne dubbatan.
Raashiyaan filannoo Ameerikaa irraa of qusachuu qabdi jedhan. Saanders kaleessa akka dubbatanitti ji'a darbe keessa qondaaltotni Ameeerikaa akka Raashiyaan isa gargaaruu barbaaddu natti itti himaniiru.
Raashiyaan bifa akkamiin filannoo Ameerikaa keessa gidduu galuu akka barbaaddu ifa mitis jedhan dubbii Kaalifoorniyaatti taasisaniin.
Senaaterii Vermoonti ganna 78 kun yaada Raashiyaa kana mormaniiru. Pirezidaanti Puutin ilaalchisee 'mootummaa abbaa irree' jechuun ibsanii, nama mootummaan isaa interneetii fayyadamuun olola gaggeessee biyya keenya addaan qoqqoodudha jechuun balaaleffatan.
Filannoo Ameerikaa 'duula na filadhaa jibbisiisaa' booda
Joe Biden filannoo bara 2020 nan dorgoma jedhan
Raashiyaan 'filannoo Ameerikaa irratti xiyyeefachu dandeessi'
Kana ifatti beekuu qabna. Raashiyaan nu qoqooduun dimokiraasii Ameerikaa gadi qabuu barbaaddi. Ani faallaa pirezidaantii ammaa kana yaada Raashiyaa fi humnoota alaa kamiyyuu filannoo keenya gidduu harka galfachuu barbaadan nan morma jechuun ibsan.
Saanders dimokiraatiksooshaalisti jechuun kan of waamu pirezidaantummaaf Dimokiraatota irraa dorgimuuf dursaa jira.
Waashingitan Posti akka gabaasetti Tiraampii fi qaamoleen seera baastotaa Ameerikaa, Raashiyaan akka deeggarsa gochuufii barbaaddu dhagahaniiru.
Qondaaltotni tikaa olaanoon akka jedhanittti ammoo Raashiyaan dhuguma filannoo Ameerikaa Sadaasa keessa gaggeeffamu keessa harka galfachuu barbaaddi.
Raashiyaan filannoo Ameerikaa bara 2016 keessa harka galfachuun burjaajesiteetti jedhamuun qoratamaa ture.
Filannoo walakeessaa Ameerikaa: 'Duula na filadhaa jibbisiisaa' booda
6 Sadaasa 2018
Filannoo Ameerikaa: Dureessichi Maayikil Biluumbarg jedhamu pirezedaantummaatiif dorgomuuf
8 Sadaasa 2019
Filannoo US bara 2020: Joe Biden akka dorguman ifa godhan
25 Ebla 2019
Oggannaan CIA Raashiyaan filannoo Ameerikaa kan jidduurratti xiyyeefachu dandeessi jedhan
30 Amajjii 2018
'Lola dhaabnaan US qoqqobbii kaa'uuf jettu tursiisuu dandeessi' - Antoonii Bilinkan
Ameerikaan haleellaan dirooonii Kaabul namoota nagaa galaafachuu amante